एन्फा नेतृत्वलाई गिज्याउने ‘म्याच फिक्सिङ’ ! | BBM WORLD TV
एन्फा नेतृत्वलाई गिज्याउने ‘म्याच फिक्सिङ’ !
Posted By: rozeenaon: In: खेलकुद
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले गएको २८ मंसिरदेखि ३ फागुनसम्म घरेलु शीर्ष डिभिजन लिग सम्पन्न गरेको छ । ३८ औं संस्रकणको उपाधि मछिन्द्र क्लबलाई सुम्पिँदै सम्पन्न भएको लिगमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब पुनः एकपटक उपविजेतामै सीमित भयो ।
मछिन्द्र र आर्मीबीचको अन्तिम खेल शनिबार दशरथ रंगशालामा १–० गोलको नतिजासँगै लिग टुङ्गियो । लिगमा १४ टोलीले ९१ खेल खेले ।
लिग शुरु हुँदा दिनमा दुई खेल – बिहानको खेल सातदोबाटोस्थित एन्फाको ‘एस्टो टर्फ’ मैदान र दिउँसोको अर्को खेल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुन्थे भने अन्तिम चरणमा दिनका तीन खेल एन्फा मैदानमा खेलाउँदै समापन भयो ।
यो हेर्दा लिगमा एन्फा कति सम्बेदनशिल छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ । यद्यपी एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले लिग सफलताका साथ सम्पन्न भएको संकेत समापन खेल अगाडि दिएको मन्तव्यमा झल्किन्थ्यो ।
त्यतिमात्रै होइन, उनले आगामि दिनमा लिगलाई ६ देखि ८ महिनासम्म आयोजना गर्ने दाबी समेत गरे । उनले आगामि वर्षहरुमा काठमाडौं बाहिरसमेत लैजाने घोषणा गरे ।
तर, काठमाडौंमा भएका खेल मैदानको सहि व्यवस्थापन र लिगको सफल आयोजनामै चुक्दै आएको एन्फा नेतृत्वले लिगलाई राजधानी बाहिर लिएर सञ्चालन गर्छु भन्दा धेरैले त्यसमा सत्यता देख्दैनन् । कारण, एन्फाले अहिलेसम्म गरेको काम नै हो ।
काठमाडौंमा लिग आयोजना गर्दा यहाँ भएका मैदानकै व्यवस्थापन मिलाउन नसक्ने एन्फाले जिल्लामा गएर लिग खेलाउँछु भन्दा कसरी विश्वास गर्ने ?
भखरै सम्पन्न ए डिभिजन लिगले विभिन्न नयाँ तरङ्ग उब्जाएको छ । खेलाडीको अनुशासन, रेफ्रिको निर्णयमाथि प्रश्न, क्लबको लापरबाही र एन्फा यी सबै कुरामा मुकदर्शक मात्रै बनेको देखिन्छ ।
यतिसम्मकी यो सिजनको लिगमा गोल पोष्टको जाली च्यातिएको, मैदान १२ खेलाडी खेलाउँनेदेखि खेलकै बीचमा प्रशिक्षक भाग्ने सम्मका विषयलाई लिएर एन्फाप्रतिको विश्वास घटेको छ ।
लामो सयमदेखि नियमित रुपमा हुन नसकेको लिग लगातार दोस्रो वर्ष आयोजना गरेको जस पाउने कर्मा छिरिङ शेर्पा नेतृत्वले त्यसमा भए गरेका कमिकमजोरीको जिम्मेवारी पनि लिनु पर्छ ।
अघिल्लो वर्ष रेलिगेशन विनाको लिग गरेको एन्फाले यो वर्ष एक टोली रेलिगेशन गर्ने निर्णयसहित प्रतियोगिता सञ्चालन गर्‍यो। जसमा सरस्वती क्लब पुछारमा रहँदै ‘बी’ डिभिजनमा घटुवा भएको छ ।
यो सिजनको लिगमा एउटा अर्को विषयले पनि निकै चर्चा पायो, ‘म्याच फिक्सिङ’ । लिगको अन्तिमतिर आइपुग्दा अंक तालिकामा पुछारतिर रहेका अधिकाशं टोलीका प्रशिक्षकले पोष्ट म्याच कन्फ्रेन्समा भन्ने गरेको कुरा के पनि हो भने, ‘खेलाडी हामी भन्दा जान्ने हुन्छन् । आफ्नो योजना भन्दा पनि आफ्नो योजना अनुसार खेल्छन् ।’
त्यसोत, सरस्वती क्लब र हिमायन शेर्पा क्लबबीचको खेलमा त खुलेरै म्याच फिक्सिङ भएका समाचार आए । खेलमा हिमालयन शेर्पाविरुद्ध सरस्वती क्लब ४–३ गोल अन्तरले जीत हात पारेको थियो ।
सरस्वतीका कप्तान दिपेश श्रेष्ठ र हिमालयन शेर्पाका गोलकिपर किशोर गिरीलाई तत्कालै एन्फाको इन्टिग्रीटी कमिटीले कारबाही गरेको थियो । खेलका दौरान दिपेशले विपक्षी टोलीका गोलकिपर किशोर गिरीलाई गोल हुन दिन प्रस्ताव गरेको भन्दै लिगकै दौरान उनलाई कारबाही गरेको थियो ।
त्यसो त, हिमालयन शेर्पाका अध्यक्ष एन्फा अध्यक्षसमेत रहेका कर्मा छिरिङ शेर्पा हुन् भने सरस्वती युवा क्लबका अध्यक्ष एन्फाका उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली हुन् ।त्यतिमात्रै होइन, सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबबीचको खेललाई पनि फिक्सिङ भएको आरोप सरस्वती क्लबका प्रशिक्षक प्रदिप नेपालले लगाएका थिए । सो खेलमा एपीएफ ५–२ गोल अन्तरले विजयी भएको थियो ।
एपीएफ र फ्रेन्ड्सबीचको खेलमा पनि मिलेमतो हो वा होइन भनेर अहिले एन्फाको इन्टीग्रीटी कमिटीले अनुसन्धान गरिरहेको लिग कमिटिका निर्देशक सञ्जीव मिश्र बताउँछन् ।लिग सफल भएको बताएका लिग कमिटी संयोजक विज्ञान शर्माले ‘म्याच फिक्सिङ’ भएको हुन सक्ने भन्दै एन्फाले त्यसमा अनुसन्धान गरिरहेको समेत बताएका थिए ।
उनले नेपालका खेलमा मिलेमतोदेखि सट्टैवाजी सम्म हुने गरेको बताएका छन् । ‘सेलमा तेल र खेलमा झेल नभइ रमाइलो नै हुन्न नि ! खेलमा केही झेल भएको होला । विवादहरु आउँछ । विवाद समाधान गर्दै जाने हो,’ संयोजक शर्माले भने, ‘कतिपय कुराहरुमा विवाद भइरहेको छ । यसबाट हामीले पनि केही कुराहरु सिक्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।’
शर्माले एन्फाले रेफ्रिको विवाद, खेलमा मिलेमतोका विषयहरु, मैदानको व्यवस्थपन लगायतका कुराहरुमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । यो सिजनको लिग भएका केही काममा आफैसमेत सन्तुष्ट हुन नसकेको स्वीकारेका छन् ।
लिगको अन्तिम २ चरणका खेल बिहान ८ : ४५ बजेदेखि एन्फा मैदानमा शुरु भएर बेलुका सबा ५ बजे सम्म हुन्थ्यो । त्यसका लागि पहिलो खेलका खेलाडीहरु बिहान चिसो मैदानमा भिड्नु पर्दा निकै दुख लागेको उनले बताएका छन् ।
‘दिनमा तीन खेल खेलाउनु, बिहान ७ बजे खेलाडी मैदान आएर खेल्नु परेको कुरामा म स्वयम पनि सन्तुष्ट छैन । तर, यसलाई स्वीकार्दै अबका दिनमा अगाडि बढ्नु पर्छ र यसलाई नदोहोर्‍याउने गरी लाग्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।
बढ्नथाले रेफ्रिका विवाद
संयोजक शर्मा नेपालका उठेका रेफ्रिका विवाद संसार भर आइरहेने घटान भएको बताउँछन् । खेलमा मिलेमतोका घटना भने एसियाली क्षेत्र र अफ्रिका तिर बढी देखिने गरेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘संसारमा जताततै हेरे पनि रेफ्रिको निर्णय विवादमा आइरहेको हुन्छ। म्याच फिक्सिङको कुराहरु चाँही त्यति धेरै हुँदैन । यो एसिया र अफ्रिकामा अलि हुन्छ।’
फिक्सिङका कुरा आइरहेपनि एन्फा त्यसमा कडाइका साथ लागेको उनले बताएका छन् ।
उनले एन्फाले प्रहरीसँगको सहकार्यमा खेलमा मिलेमतोका भए नभएको विषयमा अध्ययन भएरहेको बताए ।
‘म्याच फिक्सिङको कुरामा हामी कडा छौं । हामीले कडा निर्णय गर्दै आएका पनि छौं । प्रहरीसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको छ ।’
उनले एन्फा फिक्सिङ गर्नेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको र यसको परिणाम आउन बाँकी रहेको बताएका छन् । उनले नेपालमा सट्ट्बाजी गोलमा नभइ कर्नर, आउट बल र रातो कार्डमा भइरहेको बताएका छन् । ‘यहाँ अहिले झिंगे दाउको म्याच फिक्सिङ छ । त्यसलाई घटाउँदै लिनु पर्छ,’ उनले भने ।
युरोपियन प्रतिबन्ध लागेको सिटीसँग वेष्टहाम पराजित
च्याम्पियन्स लिग : साविक विजेता लिभरपुल पराजित
रियल र सेल्टाले अंक बाड्दा बार्सिलोनालाई फाइदा